Apple mechara jikwaa webụ web iCloud.net | Esi m mac
Ọ bụ Javier Labrador | | iCloud
A maara na Apple na-anwa mgbe niile idobe ngalaba ya na ụdị ya dị n'otu n'otu ụlọ. Otú ọ dị, ngalaba iCloud.net ọ ka chọpụtabeghị ụlọ ọrụ Californian. Ngalaba a ka nọ n'okpuru nchịkwa nke obere netwọkụ mmekọrịta China rue mbido February, mana n'ikpeazụ ụlọ ọrụ teknụzụ akwụgo ụgwọ ya.
Anyị edoghị anya mgbe Apple nwetara ikike nke ngalaba a, mana dịka usoro TechCrunch si kwuo, Edeela ngalaba ahụ aha na ụlọ ọrụ Cupertino. Ihe ọmụma dị na peeji ahụ onye.is Emelitere ya na Tuesday ka anyị wee ghọta na mgbanwe ahụ mere n'oge na-adịbeghị anya.
Ọ bụ ezie na enweghi onu ogugu ochichi, ụfọdụ akwụkwọ na-ekwu na Nkwekorita a biara mgbe ugwo site na nnukwu teknụzụ nye obere ụlọ ọrụ mmekọrịta China nke $ 1.5. Mgbe a jụrụ Apple banyere ọrụ a, ọ jụrụ ịza ajụjụ.
Omume a zuru ebe niile. Na mbido afọ 2011, obere oge tupu ọ malite iCloud, asịrị na Apple ga-akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ ngwanrọ Sweden Xcerion ihe dị ka $ 4.5 nde maka ngalaba iCloud.com. Emesiri muta na ego ruru $ 5.2. Ya mere $ 1.5 maka ngalaba iCloud.net nwere ike ịbụrịrị nnabata nke ụmụ okorobịa si Cupertino.
N'ime afọ ndị gara aga, Apple na-achịkọta ngalaba weebụ niile nwere njikọ ọ bụla maka ọrụ na ngwaahịa ya. N'ihi ya, dị ka akụkọ ahụ si kwuo, Apple nwere ugbu a 170 + metụtara ngalaba iCloud, ọ bụ ezie na a ka nwere ụfọdụ ndị ọzọ.
Ihe kpatara Apple jiri zụta ngalaba a ka amabeghị n'oge a. Agbanyeghị, n'agbanyeghị ihe kpatara nke a, ihe doro anya bụ na ọka weebụsaịtị nke iCloud.net adịghịzi arụ ọrụ ma ha na-agwa ndị ọrụ ha niile na ọrụ gara aga yana data niile nke ihe nkesa gị nwere ga-ehichapụ kpamkpam na March 1st.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » iCloud » N’ikpeazụ Apple jisiri ike weghara weebụsaịtị iCloud.net